PTFE Khatimidii Factory - Shiinaha PTFE Khatimidii saarayaasha, Shirkado
Logan Engine Khatimidii Set Ptfe Oil Khatimidii Shiinaha qeybiye
-Kalas saar bambooyin usheeda dhexe caag shaabad saliid bushimaha
SALKA SALDHARKA ENGINE SET (RENAULT) SIFT SALIID SALIID
Waxyaabaha: PTFE + ACM 190 347
Pakins Vw Audi Engine Crank Shaft Oil Khatimidii Shiinaha Saaraha
Pakins Vw Audi Engine CrankShaft Oil Khatimidii
Codsiga: VW / AUDI / SEAT / SKODA / Land Rover / Mercedes-Benz / Ford
Ptfe Radial Shaft Seals Shiinaha Soo-saaraha
Khatimayaasha dibnaha ee PTFE
Waxyaabaha: Dibnaha PTFE iyo birta la adkeeyay
Codsiga: kombaresarada hawada
Ptfe dhimatay White gasket Oil Khatimidii Shiinaha saaraha
Xirmooyinka Gaskets ee ka samaysan maadada PTFE (teflon) oo leh naqshad khilaaf hooseeya waxay bixiyaan waxqabad sare iyo adkeysi.
PTFE / teflon radial shaft seals waxay u adeegsadaan shaashadda polytetrafluoroethylean daboolida firfircoon. GOS waxay bixisaa xalal kala duwan oo leh xabbad isku dhejisan oo ah PTFE iyo qaabab ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh.
Commins Crankshaft Oil Khatimidii Shiinaha Manufacturer
Xirmooyinka Crankshaft iyo camshaft ee ka samaysan maadada PTFE (teflon) oo leh naqshad khilaaf hooseeya waxay bixiyaan waxqabad sare iyo adkeysi.
Mashiinka Mashiinka Ptfe Dibno Shaft Khatimidii Shiinaha Soo-saare
Shaabadaha Scania Crankshaft Shiinaha Soo saaraha
Xirmooyinka Scania Crankshaft 1786563, 15518513,81-42912-00
Shaatiga bushimaha PTFE waxaa loogu talagalay in lagu soo koobo farqiga u dhexeeya shaabadda bushimaha elastomer iyo shaabadaha wejiga farsamada. Deegaanada cadaawada leh sida heerkulka xad dhaafka ah, warbaahinta gardarada ah, xawaaraha sare ee dusha sare, cadaadiska sare, iyo saliid la’aan ayaa ku qasbay naqshadeeyaha inuu cadeeyo shaabadaha nooca wajiga farsamada qaaliga ah. bushimaha daboolku wuxuu siiyaa naqshadeeyaha horumar wax ku ool ah oo ka sarreeya shaybaarka elastomer oo leh qiimo aad uga hooseeya shaabadda wejiga farsamada. PTFE daboolka daboolka ...